Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Malaria ငှက်ဖျားရောဂါ
ဘီစီ ၂၇ဝဝ ကတည်းက တရုပ်ဆေးကျမ်းထဲတွင် ငှက်ဖျားလက္ခဏာများရှိသည့်ရောဂါအကြောင်း ပါရှိခဲ့သည်။ ငှက်ဖျားပိုးကို ၁၈၈ဝ ရောက်မှတွေ့လာသည်။ ငှက်ဖျားပိုးအမျိုးမျိုးကို ၁၈၈၆ ရောက်မှ ခွဲခြားသိလာရသည်။
(ပနာမာ) တူးမြောင်း (၁၉ဝ၅-၁၉၁ဝ) ဖောက်လုပ်ရန် (ရဲလိုးဖီဗာ) နှင့် ငှက်ဖျားနှိမ်နင်းရေး ဆောင်ရွက်နိုင်မှ အပြီးသတ်နိုင်ခဲ့သည်။ (ကလိုရိုကွင်း)ဆေးကို ၁၉၃၄-၄၆ ကျမှတွေ့လာရသည်။ ခြင်နှိမ်နင်းသည့် DDT ဆေးကို ၁၉၃၈ ရောက်မှတွေ့ခဲ့သည်၊ နှစ်စဉ် ဧပြီလ ၂၅ ရက်ကို ကမ္ဘာ့ငှက်ဖျား ရောဂါနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ ကမ္ဘာ့လူဦးရေ၏ ၄ဝ % မှာ ငှက်ဖျားနှင့် မကင်းချေ။ နှစ်စဉ် လူဦးရေ သန်း ၅ဝဝ ကျော်မှာ ငှက်ဖျားရောဂါ ခံစားနေရသည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်များသည် အန္တရာယ်များသည်။ မီးဖွားစဉ်ကာလ သေဆုံးရမှုများ၏ ၁ဝ % သည် ငှက်ဖျားကြောင့် ဖြစ်သည်။ နှစ်စဉ် မိခင် ၁ သောင်း နှင့် တနှစ်အောက် ကလေး ၂ သိန်းတို့မှာ ငှက်ဖျားကြောင့် သေနေရသည်။ တိုင်းပြည်၏ စီးပွားရေးတိုးတက်မှု ၁.၃ % မှာ ငှက်ဖျားကြောင့် ကျဆင်းနေရသည်။ ငှက်ဖျားရောဂါကြောင့် နှစ်စဉ် လူ ၁-၃ သန်း သေနေရသည်။ အထူးသဖြင့် အာဖရိကတိုက်မှာ ၅ နှစ်အောက်ကလေးများ သေသည်။ ၃ဝ စက္ကန့်တိုင်းတွင် ၁ ယောက် သေနေသည်။ အာရှတိုက်တွင်လည်း အဖြစ်များလွန်းသည်။ ရောဂါကြီးများဖြစ်ကြသော တီဘီနှင့် (အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ-အေအိုင်ဒီအက်စ်)တို့နှင့်လည်း တွဲဖြစ်တတ်သည်။
ငှက်ဖျားသည် Protozoan Paracites (ပါရာဆိုက်) ကဖြစ်ပြီး၊ Female mosquito of the Anopheles ခြင်မကတဆင့် ကူးစက်သည့် အပူပိုင်းဒေသရောဂါ ဖြစ်သည်။ ပါရာဆိုက် (၄)မျိုးရှိသည်။ Plasmodium Falciparum, Plasmodium Vivax, Plasmodium Ovale, Plasmodium Malariae တို့ ဖြစ်ကြသည်။ သွေးဖောက်ပြီး မှန်ပြားပေါ် တင်ကြည့်ခြင်းဖြင့် ရောဂါပိုးအမျိုးအစားနိုင်သည်။
ငှက်ဖျားခြင် အကိုက်ခံရပြီး ၁-၃ ပါတ်ကြာမှ ရောဂါလက္ခဏာများ ပေါ်မည်။ အချိန်မှန် အဖျားတက်-ကျ၊ ချမ်း၊ အဆစ်နာ၊ ပျို့အန်၊ ဝမ်း ပျက်၊ သွေးအားနည်း၊ ဆီးထဲသွေးပါ၊ တက်၊ သတိမေ့၊ ခေါင်းကိုက်-ကိုယ်လက်ကိုက်ခဲ၊ ကျောက်ကပ်အလုပ်မလုပ်ခြင်း၊ ဘေလုံးကြီးခြင်း။
ငှက်ဖျားပိုးရှိနေသောလူတယောက်ကို ခြင်မကကိုက်ပြီး ငှက်ဖျားပိုးများ ခြင်မထဲရောက်လာသည်။ ခြင်မ၏ အစာအိမ်ထဲမှတဆင့် ခြင်မ၏ တံတွေးအိပ်ထဲရောက်လာမည်။
၄င်းခြင် အကိုက်ခံရသည်၏ အရေပြားထဲ ငှက်ဖျားပိုးဝင်လာမည်။ ခြင်မသည် ညအချိန်တွင် ပို၍ကိုက်တတ်သည်။ ငှက်ဖျားပိုးကို သွေးသွင်းခြင်းမှလည်း ကူးစက်နိုင်သည်။
ငှက်ဖျားပိုးရှိနေသော ခြင်အကိုက်ခံရသူ၏ သွေးထဲသို့ ငှက်ဖျားပိုး sporozoites ဝင်လာသည်။ ပိုးသည် လူ၏ အသဲထဲ ရောက်လာမည်။ အသဲထဲတွင် hepatocytes ပိုးများ ပွားများလာမည်။ ၄င်း merozoites တို့သည် အသဲ (ဆဲလ်)များ ပေါက်ကွဲထွက်ရာမှ သွေးထဲ ပြန်ဝင်လာမည်။ သွေးထဲက သွေးနီဥ erythrocytes များအား ကူးစက်လာသည်။ လက်စွပ်ပုံသဏ္ဌာန် ring forms ဖြစ်နေမည်။ ထိုမှ trophozoites (a feeding stage), schizonts (a reproduction stage), merozoites again အဆင့်ဆင့် ပြောင်းလာမည်။ trophozoites (a feeding stage), schizonts (a reproduction stage), merozoites again များသည် သွေးနီဥဆဲလ်များထဲက ကွဲထွက်လာကာ သွေးထဲပြန်ဝင်လာမည်။
၁) ကာကွယ်သည့် ဆေးများပေးခြင်း၊ ခရီးမသွားမီ ဆေးသောက်ခြင်း၊
၂) ခြင်နှိမ်နင်းဆေးသုံးခြင်း၊ ခြင်နှိမ်နင်းဆေး DDT ဆေးကို အခြားပိုးသတ်ဆေးများအတွက်လဲသုံးရာ အန္တရာယ်ရှိပြီး အချို့နိုင်ငံများတွင် သိပ်မသုံးတော့၊ WHO က အခြားဆေး ၁၂ မျိုး သတ်မှတ်ထားသည်။
၃) ခြင်အကိုက် မခံရအောင် ကာကွယ်ခြင်း၊ (ခြင်ထောင်၊ ခြင်ဆေးခွေ၊ (ရီပဲလင့်) လိမ်းခြင်း၊)
စောစီးစွာရောဂါရှာခြင်းနှင့် ထိရောက်စွာကုသခြင်းတို့ လိုအပ်သည်။ ဆေးပြီးသည့် ငှက်ဖျားများရှိသည်။
P. vivax, P. ovale or P. malariae အား အပြင်လူနာအဖြစ် ကုသပေးနိုင်သည်။
P. falciparum အား အရေးပေါ်ဆေးရုံတင် ကုသပေးရမည်။
Quinine ပါဝင်သည့် Cinchona tree အပင်၏ အခေါက်သည် ပထမဆုံး ထိရောက်သည့် ကုသဆေးဖြစ်သည်။
For curative treatment of Malaria ငှက်ဖျားကုသရန်ဆေးများ၊
1. Chloroquine 100 Mg, 150 Mg as Phosphate or Sulfate syrup; 50 Mg as Phosphate or Sulphate/5ml; Injection 40 Mg as Hcl, Phosphate or Sulfate/ml in 5-ml Ampoule
2. Artemether Injection 80 Mg/ml in 1-ml Ampoule
3. Artesunate Tablet 50 Mg
4. Doxycycline Capsule or Tablet 100 Mg as HCl for use only in combination with Quinine
5. Mefloquine Tablet 250 Mg as HCl
6. Sulfadoxine-pyrimethamine (Sulfadoxine 500 Mg + Pyrimethamine 25 Mg)
7. Artemether-lumefantrine (Artemether 20 Mg + Lumefantrine 120 Mg)
11. Primaquine = P. vivax and P. ovale = (Primaquine Tablet 7.5 Mg as Diphosphate)
12. Quinine (Quinine Tablet 300 Mg as Bisulfate or Sulfate Injection, 300 Mg as dihydrochloride/ml in 2-ml Ampoule)
1. ချက်ချင်း ၄ ပြား၊ ၆ နာရီခြားပြီး ၄ ပြား၊ နောက်နေ့၂ ပြား၊ စုစုပေါင်း ၁ဝ ပြား၊ (သို့မဟုတ်)
2. ချက်ချင်း ၄ ပြား၊ ၆ နာရီခြားပြီး ၂ ပြား၊ နောက်နေ့၂ ပြား၊ နောက်နေ့၂ ပြား၊ စုစုပေါင်း ၁ဝ ပြား၊
Chloroquine: Childern = 10 mg base/kg PO, not to exceed 600 mg; then5mg base/kg PO; not to exceed 300 mg at 6-hour, 24-hour, and 48-hour intervals (total 25 mg base/kg)
ကာကွယ်ရန်အတွက် ငှက်ဖျားဒေသသို့မသွားမီကတည်းက Chloroquine ကို တပါတ်လျင် ၂ ပြားသောက်ရမည်။
Chloroquine ၏ မကောင်းသောသတ္တိများ၊ ခေါင်းကိုက်၊ ယား၊ အရေပြားအနီပြင်ထွက်၊ ဆံပင်ကြွတ်၊ အမြင်အားနည်း၊ အစားပျက်၊
Chloroquine ပြီးသည့် (ဖယ်စီပယ်ရမ်) ပိုးကုသရန်အတွက်
Artemether-lumefantrine (Artemether 20 Mg + Lumefantrine 120 Mg)
1. Regimen I: four tablets at 0, 8, 24 and 48 hours (n = 87) သို့မဟုတ်
2. Regimen II: two tablets at 0, 8, 24 and 48 hours (n = 87) သို့မဟုတ်
3. Regimen III: four tablets at 0, 8 and 24 hours (n = 86) သို့မဟုတ်
Artemether Injection, 80 mg/ml in 1-ml ampoule x6doses
လူကြီး 100 Mg BD on day one followed by 50 Mg BD x4days
ကလေး 1.2 Mg/Kg x5days andasecond dose may be given in day one in children with severe Malaria
Artesunate 600 Mg (total dose) + Clindamycin 300 Mg BD x7daysArtesunate 600 Mg (total dose) + Mefloquine 750 Mg stat dose
Artemether ၏ မကောင်းသောသတ္တိများ၊ ပျို့ -အန်၊ ဗိုက်နာ၊ အစားပျက်၊ နှလုံးခုန်နှေး၊
Chloroquine ပြီးသည့် (ဖယ်စီပယ်ရမ်) ငှက်ဖျားပိုးကုသရန်အတွက်
Quinine Sulfate Tablet: Adult = 542 mg base (=650 mg salt) PO TDS for 3-7 days
Quinine Sulfate Tablet: Children = 8.3 mg base/kg (=10 mg salt/kg) PO TDS for 3-7 days
Qinarsol Tablets: Adults 600 mg (2 tablets) TDS x3to7days; Children 10 mg/kg TDS x3to7days
Qinarsol Injection 20 mg/kg tm; 1.4 Gm ထက်မများစေဘဲ၊ 5% D/W ထဲထည့်၍ ၄ နာရီကြာအောင်သွင်း ပေးရမည်၊ တလုံးနှင့်တလုံး (၈)နာရီခြားသွင်ပါ၊ အကြောထဲသွင်းမရပါက 20 mg/kg အသားထဲ ထိုးပါ၊ သက်သာသည်နှင့် 10 mg/kg TDS စားဆေးပြောင်းပါ၊
(ဗိုင်းဗက်စ်) ငှက်ဖျားကုသရန်အတွက်ဆေး၊ Primaquine 7.5 mg BD x 14 days. Children over 1 yr; 0.25 mg/kg x 14 days
Primaquine: Adult = 30 mg base QID x 14 days
Primaquine: Children = 0.5 mg base/kg QID for 14 days or 0.8 mg base/kg PO once/wk x 14 days
15 mg/day during the last2weeks of Chloroquine prophylaxis
Mefloquine (Lariam): Adult = 15 mg base/kg PO, then 10 mg base/kg PO 6-8 hours later (not to exceed 1250 mg; usually 750 mg PO, then 500 mg PO at 6-8 hour)684 mg base (=750 mg salt) PO as initial dose, followed by 456 mg base (=500 mg salt) PO given 6-12 hours after initial doseTotal dose = 1,250 mg salt 13.7 mg base/kg (=15 mg salt/kg) PO as initial dose, followedby 9.1 mg base/kg (=10 mg salt/kg) PO given 6-12 hours after initial dose
Mefloquine (Lariam): Children = 13.7 mg base/kg (=15 mg salt/kg) PO as initial dose, followed by 9.1 mg base/kg (=10 mg salt/kg) PO given 6-12 hours after initial dose
Mefloquine HCl, Falcital = Mefloquine 250 mg
Adults 15-25 mg/kg
Non-immune patients 1250 to 1500 mg/day stat or in2or3divided doses6to 8 hours apart
Semi-immune patients 750 to 1000 mg/day stat
Children 25 mg/kg Adults = 1250 mg asasingle dose or 750 mg as one dose, thena500 mg dose 8 hours later
Children 20 to 25 mg/kg asasingle dose or two doses
Doxycycline: Adult = 100 mg PO BD for 7days
Doxycycline: ရှစ်နှစ်အောက်ကလေးမပေးရ၊ Children >8 years =4mg/kg/day PO divided BD for 7days
Mefloquine (Lariam) Tablet 250 Mg as HCl
Proguanil (Proguanil Tablet 100 Mg HCl for only in combination with Chloroquine)
Tetracycline: Adult = 250 mg PO QID for7days
Tetracycline: Children >8 years = 25 mg/kg/d PO divided QID for7days ရှစ်နှစ်အောက်ကလေးမပေးရ၊
Atovaquone-proguanil (Malarone) ကုသရန်ဆေး၊ ကာကွယ်ရန်ဆေး၊
Mefloquine (Lariam) ကုသရန်ဆေး၊ ကာကွယ်ရန်ဆေး၊
Chloroquine ကုသရန်ဆေး၊ ကာကွယ်ရန်ဆေး၊
Cotrifazid ကုသရန်ဆေး၊ ကာကွယ်ရန်ဆေး၊
Doxycycline ကုသရန်ဆေး၊ ကာကွယ်ရန်ဆေး၊
Sulfadoxine-pyrimethamine ကုသရန်ဆေး၊ ကာကွယ်ရန်ဆေး၊
Hydroxychloroquine (Plaquenil) ကုသရန်ဆေး၊ ကာကွယ်ရန်ဆေး၊
Chloroquine ပြီးသည့် ဖယ်စီပယ်ရမ် ပိုးကုသခြင်း၊
(2) Artesunate + Amodiaquine,
(3) Artesunate + Sulfadoxine–Pyrimethamine.
(4) Artesunate + Mefloquine,
ကိုယ်အလေးချိန်၊ ဝ နာရီ၊ ၈ နာရီ၊ ၂၄ နာရီ၊ ၃၆ နာရီ၊ ၄၈ နာရီ၊ ၆ဝ နာရီ၊
၅-၁၄ ကီလို၊ - ၁ - ၁ - ၁ - ၁ - ၁ - ၁ ပြားစီ၊
၁၅-၂၄ ကီလို၊ - ၂ - ၂ - ၂ - ၂ - ၂ - ၂ ပြားစီ၊
၂၅-၃၄ ကီလို၊ - ၃ - ၃ - ၃ - ၃ - ၃ - ၃ ပြားစီ၊
၃၄ ကီလိုအထက်၊ - ၄ - ၄ - ၄ - ၄ - ၄ - ၄ ပြားစီ၊
(2) Artesunate + Amodiaquine
This is currently available as separate scored tablets containing 50 mg of Artesunate and 153 mg base of Amodiaquine, respectively. Co-formulated tablets are under development. The total recommended treatment is4mg/kg BW of Artesunate and 10 mg base/kg BW of Amodiaquine given onceaday for3days.
၅-၁၁ လ၊ = Artesunate (50 Mg) ½ ပြား၊ + Amodiaquine (153 Mg) ½ ပြား၊ x (၃)ရက်ဆက်တိုက်၊
၁-၆ နှစ်၊ = Artesunate (50 Mg) ၁ ပြား၊ + Amodiaquine (153 Mg) ၁ ပြား၊ x (၃)ရက်ဆက်တိုက်၊
၇-၁၃ နှစ်၊ = Artesunate (50 Mg) ၂ ပြား၊ + Amodiaquine (153 Mg) ၂ ပြား၊ x (၃)ရက်ဆက်တိုက်၊
၁၃ နှစ်၊ = Artesunate (50 Mg) ၄ ပြား၊ + Amodiaquine (153 Mg) ၄ ပြား၊ x (၃)ရက်ဆက်တိုက်၊
(3) Artesunate + Sulfadoxine–Pyrimethamine
This is currently available as separate scored tablets containing 50 mg of Artesunate, and tablets containing 500 mg of Sulfadoxine and 25 mg of Pyrimethamine.
The total recommended treatment is4mg/kg BW of Artesunate given onceaday for3days andasingle administration of Sulfadoxinepyrimethamine (25/1.25 mg base/kg BW) on day 1.
၅-၁၁ လ၊ = Artesunate (50 Mg) ½ ပြား၊ + Sulfadoxine-Pyrimethamine (500/25) ½ ပြား၊ x (၃)ရက်ဆက်တိုက်၊
၁-၆ နှစ်၊ = Artesunate (50 Mg) ၁ ပြား၊ + Sulfadoxine-Pyrimethamine (500/25) ၁ ပြား၊ x (၃)ရက်ဆက်တိုက်၊
၇-၁၃ နှစ်၊ = Artesunate (50 Mg) ၂ ပြား၊ + Sulfadoxine-Pyrimethamine (500/25) ၂ ပြား၊ x (၃)ရက်ဆက်တိုက်၊
၁၃ နှစ်၊ = Artesunate (50 Mg) ၄ ပြား၊ + Sulfadoxine-Pyrimethamine (500/25) ၃ ပြား၊ x (၃)ရက်ဆက်တိုက်၊
(4) Artesunate + Mefloquine
၅-၁၁ လ၊ = Artesunate (50 Mg) ½ ပြား၊ + Mefloquine (250 Mg) ½ ပြား၊ x (၃)ရက်ဆက်တိုက်၊
၁-၆ နှစ်၊ = Artesunate (50 Mg) ၁ ပြား၊ + Mefloquine (250 Mg) ၁ ပြား၊ x (၃)ရက်ဆက်တိုက်၊
၇-၁၃ နှစ်၊ = Artesunate (50 Mg) ၂ ပြား၊ + Mefloquine (250 Mg) ၂ ပြား၊ x (၃)ရက်ဆက်တိုက်၊
၁၃ နှစ်၊ = Artesunate (50 Mg) ၄ ပြား၊ + Mefloquine (250 Mg) ၄ ပြား၊ x (၃)ရက်ဆက်တိုက်၊
Recommended second-line antimalarial treatments ဒုတိယတန်းစားငှက်ဖျားဆေးများ၊
- Artesunate + Tetracycline or Doxycycline or Clindamycin,
- Quinine + Tetracycline or Doxycycline or Clindamycin.
Pregnancy and Malaria ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့် ငှက်ဖျား၊
- ကိုယ်ဝန် ပဌမ (၃)လ Quinine +/– Clindamycin
- ကိုယ်ဝန် ဒုတိယ (၃) လ နှင့် ကိုယ်ဝန် တတိယ (၃) လ
1. The ACT or
Quinine treatment for severe malaria ငှက်ဖျားအပြင်စားများအားကုသခြင်း၊
Quinine of 20 mg salt/kg BW Quinine ကို 20 mg salt/kg BW ဖြင့်သွေးထဲဦးစွာထည့်ရမည်၊ Quinine ကို Rate-controlled IV infusion အမြန်နုန်းထိန်းသည့်သွေးပြန်ကြောထဲ သွင်းနည်းသည် အကောင်းဆုံးနည်းဖြစ်သည်။ သွေးပြန်ကြောထဲ သွင်းမရမှသာ IM injection အသားထဲထိုးရမည်။
Quinine Dihydrochloride ကို Rate-controlled IV infusion အမြန်နုန်းထိန်းနည်းဖြင့် သွေးပြန်ကြောထဲသွင်းရန်၊ Saline (NS/DNS) or Dextrose (5D) solutions သုံးနိုင်သည်။5mg salt/kg BW per hour နုန်းဖြင့်အစက်ချသွင်းပါ၊
ပဌမအကြိမ်ကို 10 mg/kg BW ပေါင်တဖက်စီခွဲထိုးပေးနိုင်သည်။
Quinine Dihydrochloride 300 mg/ml အသားဆေးသည်နာလွန်းသဖြင့် မိုးရေ/ဆားရေဖြင့်ရောကာ 60–100 mg/ml ပြော့စေပြီးမှထိုးသင့်သည်။ သွင်းဆေး-ထိုးဆေးကု လူနာခံနိုင်-သောက်နိုင်လာသည်နှင့် ပါးစပ်က တိုက်နည်းသို့ပြောင်းပါ။ စုစုပေါင်း (၇) ရက်ကြာမည်၊
Artemether ကို IM အသားထဲထိုးနည်းဖြင့် Quinine IV infusion အားအစားထိုးနိုင်သည်။
လူနာရောက်လျင်ရောက်ချင်း Artesunate 2.4 mg/kg BW IV or IM ထိုးပါ၊ ၁၂ နာရီခြား၊ ၂၄ နာရီခြား၊ နောက်ထပ် ၂၄ နာရီခြား တလုံးစီထိုးပါ။ စုစုပေါင်း ၆ လုံးဖြစ်သည်။
- Artesunate 2.4 mg/kg BW IV or IM given on admission (time = 0), then at 12 h and 24 h, then onceaday;
- Artemether 3.2 mg/kg BW IM given on admission then 1.6 mg/kg BW per day;
- Quinine 20 mg salt/kg BW on admission (IV infusion or divided IM injection), then 10 mg/kg BW every 8 h; infusion rate should not exceed5mg salt/kg BW per hour.
MALARIA CAUSED BY P. VIVAX, P. OVALE OR P. MALARIAE ဒုတိယအရေးကြီးဆုံးဖြစ်သည့် ငှက်ဖျား၊
- Chloroquine 25 mg base/kg BW divided over3days, combined with primaquine 0.25-0.5 mg base/kg BW, taken with food once daily for 14 days is the treatment of choice for Chloroquine-sensitive infections.
- Amodiaquine (30 mg base/kg BW divided over3days as 10 mg/kg BW single daily doses) combined with Primaquine should be given for Chloroquine-resistant Vivax Malaria.
Primaquine လူကြီး၊ 30 mg base တနေ့ ၄ ကြိမ်၊ ၁၄ ရက်၊
Primaquine ကလေး၊ 0.5 mg base/kg တနေ့ ၄ ကြိမ်၊ ၁၄ ရက်၊ (သို့) 0.8 mg base/kg တပါတ် တကြိမ်၊ ၁၄ ရက်။